Ny coils vy galvalume dia antsoina koa hoe coz aluzinc / coil zincalum / coil aluminium vita amin'ny savily. Izy io dia misy alimina 55%, zinc 43,4% ary silika 1,6% sitrana amin'ny 600 ℃。 Mamorona kristaly quaternary matevina, ka mamorona sakana mahery sy mahomby hisorohana ny fidiran'ny harafesina fa ...
Data momba ny hatevin'ny valizy Galvalume Coil.
Galvalume Coil Coating Thickness data Ity famaritana ity dia mandrakotra firaketana vy 55 metaly-zinc mifangaro vy ao anaty coil ary manapaka ny halavany. Ity vokatra ity dia natao ho an'ny fampiharana mitaky fanoherana ny harafoana na fanoherana hafanana, na izy roa. Ny vokatra dia novokarina tamin'ny fanondroana maro, karazana, ...
Ny fampandrenesana fampahalalana ho an'ny ASTMA 653 Galvanized Coil Zinc-coated na zinc-iron dia mifono vy amin'ny coil ary ny halavany tapaka dia novokarina tamin'ny takiana matevina voalaza tamin'ny 0,001 in. [0,01 mm]. Ny hatevin'ny ravina dia misy ny metaly ifotony sy ny firakotra. Ny baiko momba ny vokatra amin'ity speci ...
Galvanized Steel Coil Coating hatevin'ny
Galvanized Steel Coil Coating Thickness Ampiasao ireto fifandraisana manaraka ireto hanombanana ny hatevin'ny firakotra avy amin'ny lanjan'ny coating [faobe]: 1,00 oz / ft2 famonoana lanjany = 1,68 mils hatevin'ny firakotra, 7.14 g / m2 firakotra firakotra = 1.00 µm matevina. Ampiasao ity fifandraisana manaraka ity hanovana ny coating ...